DELTA: ỤLỌ ỤKA ADADOLA NDI ỤKA. – hoo!haa!!
Aka na-achị steeti Delta bụ Sịnetọ Ifeanyị Okowa ebeela akwa arịrị maka onye ahụ ụlọ ụka dagburu n’ụlọ ụka ndi Katọlik nke Pọọl dị asọ, n’Ugolo, Adagbrasa nke dị n’okpuru ọchịchị ime obodo Okpe na steeti Delta. Yabụ aka na-achị steeti ahụ kwekwara nkwa na gọọmenti ya ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ndi niile merụrụ ahụ n’ihe mberede ahụ.
N’ozi nke onye ode akwụkwọ mgbasa ozi aka na-achị steeti ahụ bụ Mazị Chals Aniagwụ weputara, Okowa kọwara ihe mberede ahụ dịka nnukwu ihe nnwute. Dịka osi dị n’ozi ahụ, Okowa ezipula kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ọrụ, bụ Ichie Jemis Augoye ka ọ gaa ma were anya ya hụ ma chọpụta ihe nwere ike ibute ihe mberede ahụ. Kọmishọna a ga-achọpụtakwa ụzọ gọọmenti ga-esi nyere ndi nke a metutara, nakwa ndi ụlọ ụka ahụ aka.
Okowa kpekwara ekpere maka ezigbo ezumike mkpụrụobi onye ahụ nwụrụ n’ihe mberede a, o jiri aha ndi steeti Delta niile nakwa gọọmenti ha, tasie ndi ezinụlọ onye a nwụrụ anwụ nakwa ndi nke merụrụ ahụ obi. Ọ tasikwara ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Delta, aka na-achị okpuru ọchịchị ime obodo Okpe nakwa eze ọdị n’ala ndi Okpe bụ Ọchị agha Felis Mujakperuo lagoro ezumike nka, tinyekwara ndi Okpe niile obi.
Site na nchọpụta nke kọmishọna na-ahụ maka ọrụ na steeti Delta bụ Ichie Jemis Augoye mere, a chọpụtara na otu onye nwụrụ pịị n’oke ihe mberede a, mmadụ iri na otu merụrụ ahụ. Ebugara mmadụ iri n’otu ahụ ụlọgwu bụ ebe anọrọ na-lekọta ha anya. Ahapụla mmadụ asaa n’ime ha ka ha lawa. Mmadụ anọ ndi ọzọ ka nọ n’ụlọ ọgwụ na-anaragodu ọgwụ.
Kọmishọna a kọwara na ụlọ ụka a agbaala otu naarị afọ, o kwuru na ebe ana-agba mbọ ka arụgharịa yabụ ụlọ ụka ma mekwa ya ka o buwanye ibu, ka mgbo aja ụlọ ụka ahụ nke ochie jiri koropu ma daa. Ọ sị na ihe kpatara nke a bụ na mmiri ereriela ukwu ụlọ ahụ tinyekwara na ndi ụka dadọra ahụ aja ụlọ ụka ahụ mgbe ha na-aka ụka n’ụtụtụ ahụ.
Mgbe ọ na-etinye ọnụ na nchọpụta nke kọmishọna ahụ, onye ọchịchị a bụ Okowa kwere nkwa na ya ga-akwụ ụgwọ ụlọgwụ ndi ahụ niile ebugara ụlọgwụ. Ọ gakwara n’ihu gwa ndi niile ọbụ ọrụ ha bụ ịrụ ụlọ, ka ha jiri usoro kwesịrị ekwesi na-arụ ọrụ tinyekwara inweta ikike nkwadò tupu ha-amalite ọrụ ha, ọkachakwa mgbe ha na-arụ ụlọ ezumezu ndi mmadụ, maka iji gbochie ụdị ihe mberede a.
Previous Post: ONYE NNỌCHITE ANYA POOPU ETOOLA UGWUANYỊ
Next Post: EWU N’ATỤRỤ